स्मरण क्षमता बढाउने तरिकाहरु थाहा पाउनुहोस ।
कुनैपनि पाठ वा पुस्तक पढेपछि त्यसलाई हामी कति लामो समयसम्म स्मरण गर्न सक्छौं ? यो मान्छेको आफ्नो क्षमतामा भर पर्छ ।
साथसाथै उसले कसरी सो पाठ पढेको छ वा पढ्ने विधी अपनाएको छ भन्ने कुराले पनि यसमा अर्थ राख्छ ।
जबकी हामीमध्ये धेरैले सही ढंगको पठन विधी अपनाइरहेका हुँदैनौं । शिक्षक वा आमाबुवाले पनि सही ढंगले पढाउन वा बुझाउन सकिरहेका हुँदैनन् ।
कसरी पढ्दा त्यसलाई सजिलो ढंगले स्मरण गर्न सकिन्छ ? सही विधी के हो ? पढेको पाठलाई राम्ररी स्म’रण गर्नका लागि अनेक विधी खोजिएको छ ।बम”नोविज्ञानको एक प्रख्यात पत्रिकाले पढ्ने सहि र गलत तरिकाको बारेमा परि’क्षण गरेको छ ।
तपाईं नयाँ शब्द सिक्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ भने धेरैले अपनाउने सबैभन्दा आम रणनी’ति हो मुखमा न’झु’ण्डिएसम्म रटा’न लगाएर घोक्ने । तर, मनोवै’ज्ञानिक यो तरिका ठिक होइन । रटान लगाएपनि हाम्रो दिमागले यी कुराहरुलाई सुरक्षित रुपमा भण्डा’रण गरेर राख्न सक्दैन ।
केही समयको अन्तरमा पढ्ने
तपाईं कुनै किसिमको विषय वा पाठलाई याद राख्न चाहनुहुन्छ भने उक्त लेख, शब्द वा पाठलाई थोरै थोरै अन्तर पछि मात्रै दोहोर्याएर पढ्नुहोस् । यसले तपाईंको स्मर’णशक्ति ताजा रहन्छ । कुनै पुस्तकको एक अध्याय पढ्नुहोस् र फेरि केही समय अरु पढ्नुहोस् ।
केहि अन्तराल पछि फेरि पहिले पढेको पाठ पढ्नुहोस् । यो अन्तर एक घन्टा, एक दिन वा एक साताको हुन सक्छ । पढिसकेपछि आफूले पढेको कुरा कति स’म्झिँए भनेर आफैले परिक्षा लिन सक्नुहुन्छ । यसो गर्नाले तपाईंको दिमाग उक्त विषयसँग कैयौं पटक आमने सामने हुन्छ ।
मूख्य बुँ¥दालाई अन्डरलाइन गर्ने
दो’स्रोपटक पढ्ने वा रटान लगाउने तरिका जस्तै यो रणनीति पनि धेरै नै नै आम हो । यो उपायमा कुनै खराबी छैन । पढ्ने बेलामा तपाईंलाई जुन कुराः शब्द वा वाक्य महत्वपूर्ण लाग्छ त्यसलाई चिन्ह लगाएर अण्ड’रलाईन वा हा’इलाइट गर्नुहोस् ।
तर, मनोविज्ञान भन्छ यो उपाय धेरैजसो समय तपाईको लागि उपयोगी हुँदैन । धेरै छात्रछात्राहरुले त पुरा प्याराग्राफ नै अण्डरलाईन गर्छन् । उनीहरु महत्वपूर्ण वाक्य र कम महत्वपूर्ण वाक्यमा फरक नै छुट्याउन सक्दैनन् ।
रोकेर मनन गर्ने
कुनै पनि पुस्तक एक पटक पढेपछि त्यसको जुन हिस्सा तपाईंलाई महत्वपूर्ण लाग्छ त्यसलाई अण्डरलाईन गर्न वैज्ञानिकहरुले सल्लाह दिन्छन् । तर, दोस्रो’पटक पढेर यो काम गर्नुभयो भने तपाईंलाई दो’स्रोपटक त्यसै विषयमा सोच्ने मौका मिल्नेछ । तपाईं बेफिक्रि भएर हरेक वाक्यलाई अण्डरलाईन गर्नबाट बच्नुहुन्छ । त्यसैले महत्वपूर्ण भाग मात्रै विचार गर्नुहोस् ।
तपाईं कुनै पनि क्लासरुम वा लाइब्रेरीमा जानुहोस् । धेरै जसो छात्रछात्राहरु नोट बनाउँदै गरेका देखिन्छन् । धेरै विद्यार्थीहरुले अति उत्साहमा फाल्तु कुराहरु पनि नोट गर्ने गर्छन् । तर, पछि ती नोटहरु कुनै कामको हुँदैन । त्यसैले आवश्यक कुराहरुमात्रै नोट बनाउनुहोस् ।
छात्रछात्राहरुले जति कम नोट बनाउँछन त्यति नै उनीहरुलाई पढेको कुराहरु याद हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न किसिमले साबित भएको छ । किनभने जब तपाईं पढेको कुनै अध्यायलाई नाप’तौल गरेर शब्दमा नोटको रुपमा लेख्नुहुन्छ तब तपाईंलाई गहिराईमा गएर सोच्नुपर्छ । शब्द र वाक्यलाई नयाँ तरिकाबाट सम्झिनुपर्छ ।
यसो गर्दा तपाईंको दिमागले पढेको कुराहरुलाई दो’स्रोपटक याद गर्छ । महत्वपूर्ण कुराहरुलाई स्टो’र गर्छ । अक्सर कागजमा कलमले नोट बनाउनु धेरै फाइदाकारी हुन्छ । ल्यापटप वा कम्प्युटरमा टाइप गरेर नोट बनाउनु पाठहरु स्मरण गर्ने त्यति प्रभा’वकारी तरिका होइन ।
धेरै शिक्षकहरुले आफ्नो छात्रछात्रालाई कुनै पनि पाठको एक खाका तयार बनाउन भन्छन् । कुनै पनि विषयको कुन मह’त्वपूर्ण कुरालाई पछि गएर पढ्न र याद राख्नुपर्छ ।
शिक्षकहरुले कैयौंपटक यो काम आफै गर्छन् र कैयौपटक छात्रछात्राहरुसँग पनि गराउँछन् । आउटलाईन वा खाका तयार गर्नाले छात्रछात्राहरुलाई विषय सम्झिन मद्ध’त पुग्छ ।
विषयको गहिराई बुझ्ने
पहिले एक सामान्य खाका तयार गर्नुहोस् र फेरि विषयको गहिरो कुराहरुलाई त्यसमा टिपोट गर्नाले याद राख्न सजिलो हुन्छ । यसले विषय सम्झिन पनि धेरै सजिलो हुन्छ ।
तपाईं कुर्नै पनि लेक्चरको महत्वपूर्ण मु’द्दाहरुलाई बुलेट प्वाइन्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ । याद राख्नुहोस् जति कम शब्दमा लेख्नुहुन्छ त्यति नै पछि याद गर्न सजिलो हुन्छ ।
आफ्नै जाँच लिने
जुन कुनै पाठ पढेका हुन्छन् त्यसलाई धेरै विद्यार्थीहरुले आँफैसँग परिक्षा लिएर कत्तिको तयारीलाई भएको छ त्यो बुझ्ने गर्छन् । तथ्य’हरुलाई कति गहिराइले सम्झिएको छ यो थाहा पाउनको लागि आँफै प्रश्न गर्छन । यसले स्मर’णशक्ति बढ्छ र, पछि परिक्षामा अझै राम्रो गर्न सकिन्छ ।
धेरै मानिसहरु उनीहरुको दिमागको सम्झिने सीमा कति छ भनेर थाहा पाउँदैनन् । उनीहरु आँफैलाई धेरै स्मार्ट सोच्छन् । जबकी वास्त”¿विकतामा उनीहरु त्यति चतुर हुँदैनन् । अति आत्मविश्वासबाट सबैजना बच्नुपर्छ ।
कुनै पाठ स्मरण गर्न जति सावधानी र मेहतन गर्नुपर्छ उनीहरु त्यो गर्न पाउँदैनन् । अति आत्म’विश्वासमा मानिसहरु आफूलाई याद भएको दाबी गर्छन् । तर, आवश्यकता परेको बेलामा पछि उनीहरु दिमागको आल’मारीबाट उक्त पाठ निकाल्न पाउँदैनन् ।
हामी जे पढ्छौं त्यसको एक ठूलो भाग समयसँगै पछि भुल्न सक्छौं । यसैले कुनै पाठ पढेको केही अन्त’राल पछि नै आँफैलाई दो’स्रोपटक जाँच गर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस् साँच्चै नै याद भएको छ कि छैन । -इन्फोलिन्क
२०७८ बैशाख २८, मंगलवार ०५:४१ गते 1 Minute 330 Views
न बोल्न जिब्रो चल्छ न हिँड्नलाई खुट्टा, बाँसबाट बनाउँछन् अदभुत कलाकृति !
आल्मुनियम,स्टिल,माटो कस्तो भाडाँमा खाना पकाउनु स्वास्थ्यका लागी लाभदायक ।
घर वरपर र आँगनमै पाइने यो लाजमान्ने विरुवाको यति धेरै औषधि हुन्छ जानिराखौ ।
१.	‘खुसी बिना पैसाको के काम’ भन्दै नागा सँग पैसा नलिने निर्णयमा सामान्था !
२.	चन्द्र भण्डारी भन्नुहुन्छ : नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने ८० प्रतिशत नेता जेल जान्छन ।
३.	५५ अर्ब लगानीमा बन्ने विश्वकै लामो मुक्तिनाथ केबुलकारले गति लियो – आइपीओ जारी गरिने !
४.	मलेसियाको टप ग्लोबमा कार्यरत नेपाली श्रमिक ड्युटीकै क्रममा ढ’लेर मृ’त्यु ।
५.	परदेशबाट फर्कनेको दसैं कोसेली – टिभी, मोबाइल र ब्ल्यांकेट, अर्काको सुन बोक्नेहरु प्रहरी खोरमा !
६.	कामदार अभाव पछि मलेसियाले नेपाली लैजाने, मलेसियाले चाल्यो यस्तो कदम !
७.	अब वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पनि पेन्सन, कस्ताले पाउछन्?
८.	मलेसियामा रोजगार पासको नयाँ निति प्रस्ताव, नेपालीको लागी यस्तो हुने !
९.	साफ च्याम्पियनसिप आयोजकलाई नै प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले थर्काए !
५ पटक जब मेस्सी-नेयमारको जोडीले विपक्षी टोलीलाई तोरीका फूल देखाईदिए !
प्रशिक्षक अलमुताइरी भन्नुहुन्छ : नेपाल मेरो मुटुमा छ, त्यो कसैले हटाउन सक्दैन ।
कोच अलमुताइरीको भन्छन् : नेपाली टोलीको खुलेर स्वागत र सम्मान गरिदिनुहोस ।
हिमाली क्षेत्रको भरपर्दो यातायात खच्चर र चौँरी याक !
भुटानले सीमा वार्ता अघि बढाउने सम्झौता गरेपछि नरेन्द मोदी त’नावमा !
आईजीपीको एक्सन – खसी घुस लिएको पुष्टि भएपछि इन्स्पेक्टर शंकर खड्का कार’वाहीमा !